को-को हुन् नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सम्भावित नेताहरु ? - Seto Page Seto Page
को-को हुन् नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सम्भावित नेताहरु ?
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा भव्य ढंगले सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेले केन्द्रीय पदाधिकारीहरु र मनोनित बाहेक केन्द्रीय कमिटीमा रहने सदस्यहरु टुङ्ग्याएको छ।
महाधिवेशन लगत्तै चितवनमा सम्पन्न पहिलो केन्द्रिय कमिटीको बैठकले आगामी मङ्सिर २५ र २६ गते काठमाडौंमा दोश्रो बैठक तय गरेको थियो। नेताहरुका अनुसार बैठकले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र केन्द्रिय सदस्यहरुको मुख्य कार्यविभाजन टुङ्ग्याउने बुझिएको छ।
अहिलेदेखि नै स्थायी कमिटीमा पर्न योग्यता पुगेका नेताहरु पार्टी पदाधिकारीहरुसँग छलफल, लविङ्ग र परामर्शमा जुटेका छन्। श्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिवालयले समेत आगामी बैठकबारे तयारी थालिरहेको बुझिएको छ। विपक्षमै भएपनि देशकै ठूलो र शक्तिशाली पार्टी भएकोले पदाधिकारीपछि सबैभन्दा निर्णायक मानिएको स्थायी कमिटीमा कसले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने कौतुहलताको विषय बनेको छ।
को हुन ? नेकपा एमालेका भावी उपाध्यक्ष देवराज घिमिरे !
एमालेको विधानमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बन्ने उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये १९ जना केन्द्रीय पदाधिकारी स्वतः स्थायी कमिटी सदस्य बन्ने छन् । अघिल्लो कार्यकालमा स्थायी कमिटीमा रहेका धनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, किरण गुरुङ, रघुजी पन्त र मणि थापा दोहोरिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ। त्यसबाहेक २२ जना नयाँ अनुहारले स्थायी कमिटीमा प्रवेश पाउनेछन। जसमा देवराज घिमिरे,कर्ण थापा, यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, अग्नि खरेल, गुरु बराल, शेरबहादुर तामाङ, शेरधन राई, डा. राजन भट्टराई, खगराज अधिकारी, गोकुल बास्कोटा, गोरखबहादुर बोगटी, परशुमेघी गुरुङ, नदरमुनि राना, महेश बस्नेतल, मणि थापा र प्रभु शाहको सम्भावना निकै बढी देखिन्छ।
पुर्व माओवादीबाट टंक आङबोहाङ, गौरीशंकर चौधरी, ज्वालाकुमारी साह पनि लबिङमा छन् । त्यस्तै एउटा पक्षले रावललाई मनाएर स्थायी कमिटीमा राख्ने र लालबाबु पण्डितलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेर स्थायी कमिटीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव अध्यक्ष ओलीलाई दिएका छन् ।
विधानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थायी कमिटीमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने दवाव छ । त्यसैले थममाया थापा र डा. बिन्दा पाण्डे स्थायी कमिटीमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
महिलाबाटै श्रीमाया थकाली, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राधा ज्ञवाली, उषाकला राई, ममता गिरी, सीता पौडेल र सुजिता शाक्यको पनि चर्चा छ । उनीहरूमध्ये केहीलाई स्थायी कमिटीमा र छुटेकालाई पोलिटरब्युरोमा समेट्ने नेताहरूको तयारी देखिन्छ।